Ibhola lizobuyisa injabulo - Isolezwe | IOL.co.za
News Business Sport Motoring Tonight Lifestyle Travel SciTech Blogs Newspapers Classifieds Property Jobs Isolezwe Home Izindaba Ezokungcebeleka Ezemidlalo Intandokazi Ezemisakazo Ezezimoto Ibhola lizobuyisa injabulo
August 3 2012 at 11:33am Comment on this story
KUYASUKA lokho ngemidlalo yeMTN8 ngowe-Orlando Pirates neBloemfontein Celtic, ozovezwa kuSuperSport Blitz (Channel 200 ku-DStv) namuhla ngo-7.30 ebusuku. Isithombe: BackpagePix
IZOBA mnandi le mpelasonto kubathandi bebhola lakuleli njengoba amaqembu ahamba phambili ePremier Soccer League (PSL) ezobe egadulisana emzuliswaneni wokuqala womqhudelwano i-MTN 8. Kuzoqala umdlalo obhekwe ngabomvu we-Orlando Pirates neBloemfontein Celtic, ozovezwa kuSuperSport Blitz (Channel 200 ku-DStv) namuhla ngo-7.30 ebusuku. Ubhekwe ngabomvu lo mdlalo ngenxa yokuthi iBhakabhaka lizobe lidlalela ukuvikela isicoco salo, okungathi uma iphinde iyiqukula indebe nakule sizini, kusho ukuthi sebengayivalela emakhabetheni aleli qembu njengoba iqembu likwazi ukuyigcina uma isiyiwine izikhathi ezintathu zilandelana. Lokhu kusho ukuthi abaxhasi balo mqhudelwano kuzofanele bakhe indebe entsha ezodlalelwa. Eminye imidlalo ye-MTN 8 kule mpelasonto ngeyeSuperSport United neFree State Stars, ozodlala kusasa, ngo-3 ntambama, Sundowns neChiefs ozodlala ngeSonto ngo-3 ntambama noweSwallows naMaZulu nawo ozodlala ngeSonto ngo-3 ntambama. Ngaphandle kwabalandeli abazokuya ezinkundleni ezahlukene ukuyobuka le midlalo, abanye bazoyithokozela ngokuyibuka kumathelevishini. Okuqubula isasasa kakhulu ngale midlalo wukuthi alikho iqembu elizibeke phansi. Ngaphezu kwalokho sekuqalile ukuklolodelana ezimbangini ezinkulu, iChiefs nePirates ngokuthi yiliphi iqembu elizocoboshisa izindebe eziningi kule sizini. AbeChiefs bathi yibo abazojabula kwazise leli qembu litheze izinduku eziningi kanti abeBucs bathi iZimpofana zibasabisa ngenyoka efile – bona bazoqhubeka lapho begcine khona ngesizini edlule. Comment Guidelines
IOL / Isolezwe / Ibhola lizobuyisa injabulo We like to make your life easier